11 Zipụ achịcha+ gị n’elu mmiri,+ n’ihi na mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị ị ga-ahụ ya ọzọ.+ 2 Kenye mmadụ asaa ma ọ bụ ọbụna mmadụ asatọ ihe,+ n’ihi na ị maghị ọdachi a ga-enwe n’ụwa.+ 3 Ọ bụrụ na mmiri erujuo n’ígwé, ọ na-asụ asụ n’elu ala;+ ọ bụrụkwa na osisi adaa n’ebe ndịda ma ọ bụ n’ebe ugwu, n’ebe ahụ osisi ahụ+ dara ka ọ ga-atọgbọrọ. 4 Onye na-ele ifufe agaghị agha mkpụrụ; onye na-ele ígwé ojii agaghịkwa ewe ihe ubi.+ 5 Dị nnọọ ka ị na-amaghị otú mmụọ si arụ ọrụ n’ọkpụkpụ dị n’afọ nwaanyị dị ime,+ n’otu aka ahụ ka ị na-amaghị ọrụ ezi Chineke, bụ́ onye na-eme ihe niile.+ 6 Ghaa mkpụrụ gị n’ụtụtụ, ekwekwala ka aka gị zuo ike ruo n’anyasị;+ n’ihi na ị maghị ebe ọ ga-eme nke ọma,+ ma ọ̀ bụ n’ebe a ma ọ bụ n’ebe ahụ, ma ọ̀ bụ na ha abụọ ga-adịcha mma. 7 Ìhè dịkwa ụtọ, ọ dịkwa mma anya ịhụ anyanwụ;+ 8 n’ihi na ọ bụrụ na mmadụ adị ndụ ọbụna ọtụtụ afọ, ya ṅụrịa ọṅụ+ n’ime afọ niile ahụ. Ya chetakwa ụbọchị ọchịchịrị,+ ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịdị ọtụtụ; ụbọchị niile ndị bịaworo bụ ihe efu.+ 9 Ṅụrịa ọṅụ,+ nwa okorobịa, mgbe ị bụ okorobịa, ka obi na-atọkwa gị ụtọ n’oge ị bụ okorobịa, jeekwa ije dị ka ihe dị gị n’obi si dị nakwa dị ka ihe anya gị na-ahụ si dị.+ Kama mara na ezi Chineke ga-ekpe gị ikpe+ n’ihi ihe ndị a niile. 10 Ya mere, wepụ ihe na-enye nsogbu n’obi gị, ekwekwala ka ọdachi dakwasị anụ ahụ́ gị;+ n’ihi na oge okorobịa na uju ndụ bụ ihe efu.+